10 Waxyaabaha Muhiimka u ah Wax soosaarka Wax ku oolka ah | Martech Zone
10 Waxyaabaha Muhiimka u ah Soosaarista Mawduuc Hufan
Axad, Oktoobar 18, 2015 Talaado, Disembar 15, 2020 Douglas Karr
Doqon waa madal wadashaqeyn oo loo isticmaalo in lagu hagaajiyo wax soo saarka ka dhex jira ururkaaga. Waxay u tixraacaan tan sida mashiinka wax lagu qoro oo ay ku sifeeyaan tobanka shey - labadaba ha'ayada iyo madal - taasoo ka dhigaysa wax soosaarka maaddooyinka mid wax ku ool ah.
Waa maxay Mashiinka Mawduuca?
Mashiinka maaddadu waa dadka, geeddi-socodka, iyo aaladaha soo gudbiya wax-qabad tayo sare leh, bartilmaameed leh oo isdaba-joog ah noocyo kala duwan oo warbaahin ah, oo ay ku jiraan nuxurka mareegaha, webinarrada, buugaagta elektaroonigga ah, bogagga macluumaadka, fiidiyowyada iyo is-dulsaarka.
Iibsashada Fulinta - Sababtoo ah cilmi baarista, horumarinta, qaabeynta, iyo fulinta barnaamijka suuqgeynta waxyaabaha u baahan ilaha, waa inaad muddo dheer wax ka iibsataa madaxdaada.
Macnaha istiraatiijiyadeed - Barnaamij isku dhafan doorar, dhibco xanuun, is dhexgal, iyo rabitaanka dhagaystayaasha bartilmaameedka ah sida wax loo galiyo.
Hub ka kooban - Kheyraadka udub-dhexaadka u ah halka ay dhagaystayaashaadu ka heli karaan waxyaabaha la daabacay iyo halka laga horumarin karo.
Hal abuurka - Koox dad ah oo wax qori kara, wax ka beddeli kara, arki kara oo maareyn kara waxa ku jira.
Naqshadayaasha & Farsamo yaqaannada Mawduucyada - Naqshadayaasha naqshadeynta, tifaftireyaasha fiidiyowga, khabiiro ku takhasusay cilmiga ebook iyo ebook oo qaata nuxurka una beddelaya farshaxan.
Warbaahinta Bulshada, Xayeysiinta, SEO & Wada Shaqeynta Iskuduwaha Suuqgeynta - Sameynta waxyaabo aad u fiican kuma filna, waa inaad yeelataa koox iyo xeelad si aad u horumariso.
Shaqo-socodka, Maareynta Hantida & Qalabka Wadashaqeynta - Aaladda wax soo saarka waxyaabaha sida Doqon halkaas oo aad uga shaqeyn kartid bartamaha, u xilsaaridda shaqooyinka, jadwalka, iyo ansixinta.
Jadwalka Qoraalka - kartida jadwalka iyo soo bandhigida waxyaabaha gaagaaban iyo kuwa muddada-dheer ah ee qorshahaaga ku jira.
Tilmaamaha Codka & Calaamadaha - tilmaamaha calaamadeynta iyo farriinta ee ay heli karaan abuurayaashaada iyo takhasusleydaada si loo hubiyo joogtaynta dhammaan waxyaabaha aad soo saartay.
Analytics - madal lagula socdo waxqabadka gabal kasta oo ka kooban, olole kasta, koox kasta, iyo qorshaha guud.
The Doqon madalku wuxuu kudhex jiraa Salesforce, Zapier, Okta, Bitium, Google Apps, Gmail, Apple Mail, Outlook sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamijyadiisa moobaylka ah ee Android iyo iOS.
Waxaan u adeegsaneynaa iskuxiraheena xiriirka ee boostadan, hubso inaad saxiixdo oo aad qaadato Doqon tijaabo wadid!
Tags: app iyo apptufaaxa tufaaxabitiumkalandarka maadadaMashiinka waxyaabaha ku jirawax soo saarkaGmailbarnaamijyada googlemacruufka appoktaOdoroskaiibinWrikezapier
Waa Maxay Xayeysiinta Muujinta Tooska ah ee Barnaamijku?
Ay Ka Mid Yihiin Sawirada Instagram Kordhinta Hawlgelinta Email 7x